AndroBox - Maaweelada Guryaha Caqli Badan
Ka raji kuwaaga halkan:
Posted in Sanduuqa Android, Reviews, Video2 Comments
Ka soo bax Amazon NVIDIA SHIELD TV
Kuxiranka Nolosha Google - Ku hel dhammaan waxyaabahaaga Google iyo astaamaha gurigaaga ee caqliga leh Kaaliyaha Google, la wadaag sawirradaada Google ee 4K, oo barnaamijyada aad ugu jeceshahay inaad TV-gaaga ugu dhigto Chromecast 4K.
4K HDR Powerhouse - Ka daawo Netflix iyo Amazon Video oo isku jira 4K HDR, iyo YouTube, Google Play Movies & TV, iyo VUDU ee 4K. Barnaamijyada sida HBO Hadda, Spotify, iyo ESPN waxay la kulmaan dhammaan baahiyahaaga madadaalada.
Ciyaaraha NVIDIA-Powered Gaming - Ciyaaraha khariidada ee kumbuyuutarka aad ku shaqeyso ee PC-ga loo adeegsado ee loo yaqaan '4KGR' 60 FPS. Kusoo hel NVIDIA ciyaar koronto ku shaqeysa oo daruuriga ah haddii aad u baahatid GeForce NOW. Oo waxaad ku raaxeysataa ciyaaro gaar ah oo Android ah oo keliya SHIELD.
Smart Home Diyaar u ah - Caawiyaha Google wuxuu kuu oggolaanayaa inaad codkaaga ku maamusho madadaaladaada iyo guriga caqliga leh. Ku dar SmartThings Link fiilooyinka aan xadhkaha lahayn, ku hadla, kuleyliyaha, iyo waxyaabo kaloo badan.
Posted in Sanduuqa Android, Reviews, VideoTagged androbox, sanduuqa android, nvidia, Nvidia Shield TV3 Comments
GearBest Sanduuqa TV -ga Xiaomi Mi
Posted in Sanduuqa Android, Reviews, VideoTagged androbox, sanduuqa android, Xiaomi MiLeave a comment
Halkaan ka raji rakhiis Diidmada 054
Posted in accessories, Reviews, VideoTagged Bluetooth, maamusha, Xulka Ciyaarta, wireless, Xiaomi Mi, Xiaomi Mi Wireless Bluetooth Game Handle Control ControlLeave a comment
Sanduuqaaga ka dhig mid rakhiis ah halkan
Posted in Sanduuqa Android, Reviews, Video3 Comments
H96 Pro Plus Dib u eegis Buuxda
Sanduuqaaga ka dhig mid rakhiis ah halkan H96 Pro +
Posted in Sanduuqa Android, Reviews, VideoLeave a comment
Halkan ka hel Mouse Mouse-kaaga oo jaban AirMouse
Posted in Sanduuqa Android3 Comments